Darpan Nepal – नराम्रो सपना वा अैठन भएर हैरान हुनुहुन्छ? शास्त्र भन्छ सिरानीमुनि राख्नुहोस यी ५ चिज
नराम्रो सपना वा अैठन भएर हैरान हुनुहुन्छ? शास्त्र भन्छ सिरानीमुनि राख्नुहोस यी ५ चिज
May 12, 2018adminIntresting fact01
के तपार्इलार्इ राती सुत्दा नराम्रो सपना अथवा अैठन हुने गर्छ ? कसैलाई त दैनिक त्यस्तै समस्याले सताउने गर्छ। यस्तो समस्याबाट छुटकारा पाउनको लागि शास्त्र अनुसार यसो गर्नुहोस्।
१, सुकमेल : यदि रातको समयमा तपाईलाई डरलाग्दो सपनाले सताईरहेको छ भने ५/६ वटा सुकमेल कपडामा बेरेर आफ्नो सिरानीको नजिक राख्नु पर्छ।
२, पानीले भरेको तामाको भाडा : निद्रामा डर लाग्ने सपना देखेमा पानीले भरिएको भाडा वा अम्खारा ओछ्यानको नजिक राख्नुहोस्। बिहान उक्त पानीलाई बिरुवामा हलिदिनुहोस। ३, चक्कु : वास्तुशास्त्रका अनुसार दैनिक डरलाग्दो सपना देखेर हैरान हुनुहुन्छ भने सिरानीमुनि चक्कु राख्नुहोस।
४, काट्ने हतियार : यदि तपाईसंग चक्कु छैन भने काट्ने बस्तु जस्तै नङ कटर, कैची जस्ता बस्तु सिरानी मुनि राख्दा पनि नराम्रो सपना देख्दैन। ५, पहेलो चामल : पहेलो चामलको मद्दतबाट पनि डर र नराम्रो सपनाबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ। पहेलो चामललाई कुनै कागज वा कपडा बेरेर सिरानीमुनि राखिदिनुहोस्।
६, ओछ्यान सफा गर्नुहोस : सुत्नु अघि ओछ्यान राम्ररी सफा गर्ने गर्नुहोस। फोहोर ओछ्यानमा सुत्दा पनि नराम्रो सपनाले सताउने गर्दछ। ७, कपाल बाँधेर सुत्नुहोस : सुत्ने समयमा कपाल खुल्ला छोडेर सुत्ने बानीले पनि डराउने सपना आउने गर्दछ। त्यसैले कपाल सधै बाँधेर सुत्ने गर्नुहोस।
८, जुत्ता- चप्पल : सुत्ने कोठा वा ओछ्यानको वरिपरि र खाटमुनि जुत्ता चप्पल राख्दा पनि राती नराम्रो सपना आउने गर्छ। ९, ओढ्ने : ओढ्ने कहिले पनि यस्तो प्रयोग गर्नुहुदैन। जसको रङ गाढा, धेरै प्रिन्ट, हिंसक जनावरको तस्बिर भएको हुनुहुदैन बिभिन्न अनलाइनबाट साभार
Previous Postअत्यन्तै दुखद खबर…छोरालाई धेरै पैसा कमाएर फर्कन्छु भनेका बिबेक रातो बाकस मा फर्कदै Next Post'अरुण तेस्रो आयोजना प्रदेश नं १ को समृद्धिको आधार